အန္တရာယ်! ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အန္တရာယ်! ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်
အန္တရာယ်! World Tour APK ကို
အိမ်ရှင်အဲလက်စ် Trebek အဖြစ်အမေရိက၏အကြိုက်ဆုံးပဟေဠိShow®တွေ့ကြုံခံစားဖို့တစ်ပြင်လုံးကိုအသစ်သောနည်းလမ်းအန္တရာယ်ပေါ်တွင်သင်ကြာ! World Tour ။ စစ်မှန်တဲ့အန္တရာယ်! သင်၏လက်ကို၏စွန်ပလွံအတွေ့အကြုံ။
အန္တရာယ်! World Tour အင်္ဂါရပ်များ
★အဲလက်စ် Trebek တိုကျိုမှလန်ဒန် Los Angeles မြို့ကနေကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်လည်ပေါ်တွင်သင်ကြာ!
★အခြားပြိုင်ပွဲဝင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်နှင့် WIN Streak ရ!
★သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စစ်မည်နှင့် user profiles များအားလုံးနှင့်သင်၏ရမှတ်တိုးတက်စေ!
★အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ offline mode နှင့်အတူ, ဘယ်နေရာမှာမဆို Play!
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? အန္တရာယ် Download! ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်ယနေ့!
အန္တရာယ်ပိုမိုမွမ်းမံမှုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပါပဲ! World Tour: https://www.facebook.com/JeopardyGame/
မေးခွန်းလွှာ, မှတ်ချက်များ, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်? ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြလိမျ့မညျ! support@uken.com မှာဂိမ်းရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပုံစံသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုСontact။ ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်ကြားချင်!
ဒီ app ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဆိုနီကော်ပိုရေးရှင်းမိသားစုကိုယ်စားသင်၏စိတ်ဝင်စားမှု လိုက်. ကြော်ငြာအဖြစ်တတိယပါတီများမှပါဝင်နိုင်သည်။ ဒီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, www.aboutads.info သွားရောက်ကြည့်ရှု။ အကျိုးစီးပွား-based ကြော်ငြာနှင့် ပတ်သက်. အချို့ရွေးချယ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့, www.aboutads.info/choices သွားရောက်ကြည့်ရှု။ သင်တို့သည်လည်း www.aboutads.info/appchoices မှာ App ကိုရွေးချယ်မှု app ကို download လုပ်ပါလိမ့်မည်။
© 2018 အန္တရာယ် Productions, Inc "အန္တရာယ်!" နှင့် "အမေရိကတိုက်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပဟေဠိပြရန်" All rights reserved အန္တရာယ် Productions, Inc ၏အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ရသည်။
94.80 ကို MB
Sony Pictures ရုပ်မြင်သံကြား
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း Chase - ...